စက်လှေတိမ်းမှောက် ရေလုပ်သား(၈)ဦးသေဆုံး - TheeSayChin
May 27, 2019 Min Yar Zar	0 Comments News
မုတ္တမပင်လယ်ပြင်တွင်ငါးဖမ်းစက်လှေ (၂)စီးလေပွေမိ၍စက်လှေတိမ်းမှောက် ရာရေလုပ်သား(၈)ဦးသေဆုံး
မေ လ (၂၆) ရက် နေ့ (၀၀:၂၀) နာ ရီ အ ချိန် က သုံ ခွ မြို့ နယ် သာ ယာ မြိုင် ကျေး ရွာ မု တ္တ မ ပင် လယ် ကမ်း ခြေ နှင့်(၆) မိုင်ခန့် အ ကွာ ပင် လယ် ပြင် တွင်ငါး ဖမ်း စက် လှေ(၂) စီး လေ ပွေ မိ ၍ စက် လှေ တိမ်း မှောက် ပြီးရေ လုပ် သား (၈) ဦး သေ ဆုံး မှု ဖြစ် ပွား ခဲ့ သည်…
အခင်းဖြစ်နေရာသို့သုံးခွမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မျိုးနိုင်သုံးခွမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များမီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှသွားရောက်ကူညီမှုများပေးပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာ…
စက်လှေမှောက်ရေလုပ်သားများမှာမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့ နယ်အလှပ်ကျေးရွာမှအလျား(၃၀)ပေအနံ(၈)ပေ၊ဇောက်(၆)ပေခန့်ရှိငါးဖမ်းစက်လှေ(၂)စီးဖြင့်ပဲ့နင်း ဦးကျော်ထူးအောင်(၃၄)နှစ်(ဘ)ဦးတင်အောင် ပါ(၆)ဦးလိုက်ပါလာသောငါးဖမ်းစက်လှေနှင့်ပဲ့နင်းဦးအောင်သန်းဝင်း (၃၆)နှစ်(ဘ)ဦးမောင်လှ ပါ(၆)ဦးလိုက် ပါလာသောငါးဖမ်းစက်လှေ(၂)စီးတို့ပင် လယ်ပြင်တွင်လေပွေမိ၍တိမ်းမှောက်နစ်မြှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး….
ဦးဉာဏ်မြင့်ငါးဖမ်းစက်လှေနှင့်အခြားငါးဖမ်းစက်လှေများမှတွေ့ရှိကူညီဆယ်ယူလာကြောင်းသိရပြီးငါးဖမ်းစက်လှေနစ်မြှုပ်မှုကြောင့်ပဲ့နင်းဦးကျော်ထူးအောင်လိုက်ပါလာစက်လှေမှရေလုပ်သား ဦးနိုင်ဝင်း(၅၃)နှစ်၊ ဦးအောင်အောင်(၃၆)နှစ်၊ဦးထွန်းထွန်း(၅၃)နှစ် တို့ (စီစစ်ဆဲ)(၃)ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး…
ဦးကျော်ထူးအောင်ဦးသက်ဝေ ဦးထွန်းနိုင်တို့အသက်ရှင်လျှက်ကျန်ရှိခဲ့သည်။ပဲ့နင်းဦးအောင်သန်းဝင်းလိုက်ပါသောငါးဖမ်းစက်လှေမှဦးကျော်သူ(၄၀)နှစ်ဦးစိုးဦး(၄၀)နှစ်ကျော်စိုးလွင်(၂၁)နှစ်လူကျော်(၂၀)နှစ်ဦးနိုင်(၄၀)နှစ်တို့(စီစစ်ဆဲ) (၅)ဦးသေဆုံးခဲ့ကြပြီးဦးအောင်သန်းဝင်းအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်….
သက် ဆိုင် ရာ မှ သေ ဆုံး သူ ရုပ် အ လောင်း များ ကို မီး လောင် ချောင်း ထိပ် ကမ်း န ဖူး တွင် ထား ရှိ ပြီးမေ လ (၂၇) ရက် နေ့ တွင် သေ ဆုံး သူ မိ သား စု များ ရောက် ရှိ လာ ပါ က သြင်္ဂိုလ် နိုင် ရန် နှင့် ကူ ညီ မှု များဆောင် ရွက် ပေး မည် ဖြစ် ပြီး ဖြစ် စဉ် နှင့် ပတ် သက် ၍ သုံး ခွ မြို့ နယ် ရဲ စ ခန်း မှ သေ မှု သေ ခင်း ဖွင့် လှစ် စစ် ဆေးဆောင် ရွက် လျက် ရှိ ကြောင်း သိ ရ သည်….
မုတ်တမပငျလယျပွငျတှငျငါးဖမျးစကျလှေ (၂)စီးလပှေမေိ၍စကျလှတေိမျးမှောကျ ရာရလေုပျသား(၈)ဦးသဆေုံး
မေ လ (၂၆) ရကျ နေ့ (၀၀:၂၀) နာ ရီ အ ခြိနျ က သုံ ခှ မွို့ နယျ သာ ယာ မွိုငျ ကြေး ရှာ မု တ်တ မ ပငျ လယျ ကမျး ခွေ နှငျ့(၆) မိုငျခနျ့ အ ကှာ ပငျ လယျ ပွငျ တှငျငါး ဖမျး စကျ လှေ(၂) စီး လေ ပှေ မိ ၍ စကျ လှေ တိမျး မှောကျ ပွီးရေ လုပျ သား (၈) ဦး သေ ဆုံး မှု ဖွဈ ပှား ခဲ့ သညျ….
အခငျးဖွဈနရောသို့သုံးခှမွို့နယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဦးကြျောမြိုးနိုငျသုံးခှမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ ဝငျမြားမီးသတျတပျဖှဲ့မြား ကွကျခွနေီတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှသှားရောကျကူညီမှုမြားပေးပွီးစဈဆေးဆောငျရှကျရာ…
စကျလှမှေောကျရလေုပျသားမြားမှာမှနျပွညျနယျပေါငျမွို့ နယျအလှပျကြေးရှာမှအလြား(၃၀)ပအေနံ(၈)ပေ၊ဇောကျ(၆)ပခေနျ့ရှိငါးဖမျးစကျလှေ(၂)စီးဖွငျ့ပဲ့နငျး ဦးကြျောထူးအောငျ(၃၄)နှဈ(ဘ)ဦးတငျအောငျ ပါ(၆)ဦးလိုကျပါလာသောငါးဖမျးစကျလှနှေငျ့ပဲ့နငျးဦးအောငျသနျးဝငျး (၃၆)နှဈ(ဘ)ဦးမောငျလှ ပါ(၆)ဦးလိုကျ ပါလာသောငါးဖမျးစကျလှေ(၂)စီးတို့ပငျ လယျပွငျတှငျလပှေမေိ၍တိမျးမှောကျနဈမွှုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး…
ဦးဉာဏျမွငျ့ငါးဖမျးစကျလှနှေငျ့အခွားငါးဖမျးစကျလှမြေားမှတှရှေိ့ကူညီဆယျယူလာကွောငျးသိရပွီးငါးဖမျးစကျလှနေဈမွှုပျမှုကွောငျ့ပဲ့နငျးဦးကြျောထူးအောငျလိုကျပါလာစကျလှမှေရလေုပျသား ဦးနိုငျဝငျး(၅၃)နှဈ၊ ဦးအောငျအောငျ(၃၆)နှဈ၊ဦးထှနျးထှနျး(၅၃)နှဈ တို့ (စီစဈဆဲ)(၃)ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး…..
ဦးကြျောထူးအောငျဦးသကျဝေ ဦးထှနျးနိုငျတို့အသကျရှငျလြှကျကနျြရှိခဲ့သညျ။ပဲ့နငျးဦးအောငျသနျးဝငျးလိုကျပါသောငါးဖမျးစကျလှမှေဦးကြျောသူ(၄၀)နှဈဦးစိုးဦး(၄၀)နှဈကြျောစိုးလှငျ(၂၁)နှဈလူကြျော(၂၀)နှဈဦးနိုငျ(၄၀)နှဈတို့(စီစဈဆဲ) (၅)ဦးသဆေုံးခဲ့ကွပွီးဦးအောငျသနျးဝငျးအသကျရှငျကနျြခဲ့ကွောငျးသိရသညျ….
သကျ ဆိုငျ ရာ မှ သေ ဆုံး သူ ရုပျ အ လောငျး မြား ကို မီး လောငျ ခြောငျး ထိပျ ကမျး န ဖူး တှငျ ထား ရှိ ပွီးမေ လ (၂၇) ရကျ နေ့ တှငျ သေ ဆုံး သူ မိ သား စု မြား ရောကျ ရှိ လာ ပါ က သွင်ျဂိုလျ နိုငျ ရနျ နှငျ့ ကူ ညီ မှု မြားဆောငျ ရှကျ ပေး မညျ ဖွဈ ပွီး ဖွဈ စဉျ နှငျ့ ပတျ သကျ ၍ သုံး ခှ မွို့ နယျ ရဲ စ ခနျး မှ သေ မှု သေ ခငျး ဖှငျ့ လှဈ စဈ ဆေးဆောငျ ရှကျ လကျြ ရှိ ကွောငျး သိ ရ သညျ…..
← ၃လအတွင်း ​အ​ကောင့်​တု​ပေါင်း ၂.၂ ဘီလျံအထိ ဖျက်​ချပစ်​ခဲ့တဲ့ ​​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ခ်​
အရပ် ကလန်ကလားနဲ့ စပယ်ယာလုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ ကျော်ထက်အောင် →
May 5, 2019 Min Yar Zar 0
အတုယူသင့်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ ဖုန်းပြောခြင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်များ